Mbadamba nkume Huawei MatePad 10.4 nwere ụbọchị ọ ga-ewepụta ya | Gam akporosis
Mbadamba Huawei MatePad 10.4 enweela ụbọchị mmalite
La Huawei MatePad 10.4 nke ekwentị Ọ bụ mbadamba nkume na-esote n'aka ndị na-emepụta China nke a na-achọ ịmalite. Nke a, na ịbịaru nso na ahịa ahụ, na-enyocha nzacha n'ime izu ndị gara aga iji kwuo "ọ dịghị ọzọ." Ya mere, anyị amatalarị ọtụtụ njirimara ya na nkọwapụta ọrụ gọọmentị ya, yana ọnụego enwere ike ịre ya na ahịa ndị China.
Akụkọ anyị na-ede ugbu a metụtara ụbọchị mmalite nke ngwa ọrụ a dị ọnụ ala, nke na-adịghị arụ ọrụ ọkara. Site na akwụkwọ mmado nkwado, ekpughere ozi a, anyị wee gbasaa ya n'okpuru.
Eprel 23 bụ ụbọchị anyị ga-amata Huawei MatePad 10.4
Huawei MatePad 10.4 nkwupụta ọkwa
Así es. Eprel 23 bụ ụbọchị mmalite nke mbadamba ọhụrụ a. Datebọchị a bụ ụbọchị ole na ole tupu oge mbipụta nke isiokwu a.
Anyị agaghị enweta nnukwu ịtụnanya na mmemme mmemme gị. Nke a bụ n'ihi na ha mere n'oge na-adịbeghị anya àgwà niile nke a, nke a na-egosipụta njirimara ndị metụtara ya na ihuenyo ya, processor na ebe nchekwa RAM, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Na ajụjụ, MatePad 10.4 ga-abịa na mpịakọta 10.4-inch, dị ka aha ya pụtara. Mkpebi nke a bụ FullHD. N'aka nke ya, Kirin 810 bụ usoro nyocha nke ga-eme ka mbadamba nkume ahụ nwee ike, ebe nhọrọ abụọ nke RAM na ROM ga-adị, dabere na ụdị a họọrọ. Kpọmkwem, a ga-enwe ụdị 4/64 GB na nsụgharị 6/128 GB. A na-atụkwa batrị ikike 7,250 mAh n'okpuru mkpuchi.
Banyere ọnụahịa ahụ, a na-ekwu na ọ nwere ike ịmalite site na 1,799 yuan, ọnụ ọgụgụ nke ihe dịka euro 230 ma ọ bụ 255 dollar na ọnụego mgbanwe gọọmentị. Na ahia mba ofesi enwere ike iweta ya maka onu ahia di elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mbadamba Huawei MatePad 10.4 enweela ụbọchị mmalite
Foto Google ga-enye anyị ohere iwepu ọdịyo na vidiyo ndị ahụ